Web Innovative Talent Award 2019
2019 RESULT 2018 RESULT 2017 RESULT
The best WebDesign projects were awarded
during the WIT Award Ceremony
that took place on Saturday,
April 28th, 2018, in Melia Hotel Yangon.
More than two hundred participants joined the ceremony.
$1000 + Japan Tour
Student at University of Computer Studies,Yangon
The goal of recycle myanmar website is to help myanmar citizen who want to sell their waste like paper, plastic, etc.Sine Myanmar has developing slowly that it is becoming important to keep recycling. And we believed keeping cleaning environment isakind of economic areas.
ကျွန်တော့်ကို ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ရန် အခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့ Spiceworks Company နဲ့ Sponsor Companies တွေကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဂျပန်နိုင်ငံကို သွားရောက်လေ့လာချင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ကျွန်တော် ဂျပန်နိုင်ငံကိုစစရောက်ချင်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အချိန်တိကျမှုတွေ ဘယ်နေရာမဆို Information ပြည့်စုံမှုတွေကို တွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် Senshu University ကို ရောက်တော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သင်ကြားရေးစနစ်ကို တော်တော်အားကျသွားမိတယ်။ laptop ကိုယ်စီနဲ့ 2020 Olympic အတွက် ကျောင်းသားတွေစုပြီး ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကျမလဲ ဆိုတဲ့ workshop ပုံစံလေးမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲ ဒါမျိုးလက်တွေ့လုပ်တာမျိုးတွေကျောင်းသားတွေရဲ့ idea တွေကို လက်ခံပြီး လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေ ပိုများသင့်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။
ဂျပန် နိုင်ငံရဲ့ transportation system ကတော့ အားလုံးသိတဲ့တိုင်းပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းမွန်လို့ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်နောက်ထပ်အကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ " Odaiba " ရဲ့ Miraikan လို့ခေါ်တဲ့ National Museum of Emerging Science and Innovation ကတော့ တကယ်ကျောင်းသားတိုင်း သွားရောက်လေ့လာသင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်လုံးဝမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေ၊ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာတွေက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တကယ်အကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ လူသားနီးပါးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Asimo Robot ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တကယ်အံသြတာထက် ပိုသွားတယ်။ ကျွန်တော်အဲ့တာထက် သဘောကျတာက ဂျပန်နိုင်ငံက ကျောင်းသားငယ်တွေကဒီလို National Museumမှာ လာရောက်လေ့လာခွင့်ရပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့မှတ်သားနေတာပါပဲ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုက နောက်လာမယ့် လူငယ်တွေပါပဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လူငယ်တွေကတော့ Earth Life Cycleကို မျက်လုံးထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် ရှင်းပြထားတာကိုငယ်ငယ်ထဲကလေ့လာခွင့်ရနေပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကလဲ အချိန်အပိုဆိုတာ မရှိအောင်ကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရောအဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးလား။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ GMO Internet Company ကိုသွားရောက်လေ့လာခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ Spiceworks Companyရဲ့စေတနာကိုခံစားမိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ဒီလို Company ကို သွားရောက်လေ့လာခွင့် ရရှိဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ တကယ်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ GMO Company မှ "ကြိုဆိုပါတယ်" ဆိုသော မြန်မာစာသားနှင့်ကြိုဆိုသည့်အပြင် ကျွန်တော် လာရောက်လည်ပတ်လို့ 20 minutes challenge မှာ "welcome & congrats" ဆိုတဲ့ title နဲ့ projects တွေလုပ်ပြီး နွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတာ အရမ်းကိုကြည်နူးမိပါတယ်။
မိနစ်၂၀ အတွင်းရေးတဲ့ projects တွေကို ကြည့်မိတော့ GMO က တကယ်တော်တဲ့ Designersတွေ Developers တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် အစစအရာရာ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတာတွေလဲတွေ့ရပါတယ်။ မိဘတွေအလုပ်လုပ်ရင်း စိတ်ချရအောင် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကလေးတွေကို Babysitter များနဲ့ ရုံးမှာပင် သေချာထားပေးထားပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Internet Top Company ဖြစ်တဲ့ GMO Internet Companyကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော် ခရီးစဉ် အသွားအပြန် စီးခဲ့တဲ့ ANA Airline ရဲ့ service က ကျေနပ်တာထက်ကိုပိုပါတယ်။ အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင် သေချာစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဂျပန်နိုင်ငံ ကို ၇နာရီကြာအောင် စီးရပါတယ်။ အသွားအပြန် ဘာအခက်အခဲမှ မရှိပဲ Service ကောင်းကောင်းနဲ့ သွားလာလို့ရအောင် ကူညီပေးတဲ့ ANA Airline ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို အလုပ်မအားလပ်တဲ့ ကြားက ကားနဲ့ Kamakura Great Buddha ဘုရားကို လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးတဲ့ Mr.Seiji Sekine ၊ ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံး ညီတစ်ယောက်လို သွန်သင်ဆုံးမလမ်းပြခဲ့တဲ့ အကို Myat Min Swe ၊ လေဆိပ်ကနေ လာကြိုခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလိုခင်မင်ရသော Bosuko နှင့်အတူ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုတဲ့ Spiceworks Company က အဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်နောက်ဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ဒီစာကိုဖတ်တဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံးကို WIT 2019 မှာ Challenge အနေနဲ့ ဝင်ပြိုင်စေချင်ပါတယ်။ WIT 2019 မှာ winner ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်လို့ကတိပေးပါ၊ Spiceworks က ကျွန်တော့်ထက်ကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေပေးမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Lwin Moe Paing
Student at Dagon University(Distance E-major)
I want to show some culture of Myanmar . I hope you can see part of myanmar . And You can help me by sharing information if this project is good for you . That's . So Thank you .
Hsu Nandar Htet
Student at University of Information Technology(UIT)
Yangon Public Transportation
My project is describing the information of YBS, Train(Myoe Pat) and Yangon Water bus, and also describing the location of Railway Stations and jetties's location. So you can get the information of yangon public transportation in one place. You can view the information with myanmar language and english language. I developed this website within one month because it take long to collect data. The future plan is to add more features like A way pyay list and air-line list.
Ms.Tin Aye Kywe
Former Lecturer, University of
Computer Studies, Yangon
Ms.Cho Cho Myint
Professor and Head (IT),
Professor, Senshu University, Department of Network and Information
The largest web design award in Myanmar "WIT" is hosted by Spiceworks Co.,Ltd. It is held for the purpose of creatingafoundation in which talented creators grow in Myanmar. By givingaspotlight to the success of excellent web creators, from this award we will show concrete targets for young creators'to achieve and aim foralot of talents to bloom. We will also discover and support the next generation of creators, who will try to createabrighter future for Myanmar.
There are three types of awards such as Grand Prix, Design Award and Technical Award. Mr.Seiji Sekine, managing director of Spiceworks, was deliveringakeynote speech at WIT Award Ceremony. Ms.Thazin Nwe Win, the presenter of MRTV-4, performed as MC. Then, DJ Neonz, Nay Min Eain, Mi Sandi and Project K performed and announced the winners at this ceremony.
Sponsored by ANA and Z.com
Thank you all participants and organizers forawonderful ceremony!
We will do it definitely in next year!
© 2019 Spiceworks Myanmar. All Rights Reserved.